Maxaa dhexmaray Siciid Deni & Cumar Cabdirashiid oo ku kulmay Garoowe, maxayse isku afgarteen? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Maxaa dhexmaray Siciid Deni & Cumar Cabdirashiid oo ku kulmay Garoowe, maxayse isku afgarteen?
Allhadaaftimo December 29, 2019 Uncategorized
Kulan siyaasadeed xiliyo kala duwan dhacay ayaa todobaadkan ku dhexmaray magaalada Garoowe, Madaxweynaha Puntland Siciid Deni & Senator Cumar Cabdirashiid oo ay isku beel kasoo jeedaan, kulamadaas oo Saxaafadda aan loo soo bandhigin, dhacayna xili dambe oo habeenimo ayay labada siyaasi uga wada hadleen arrimo badan oo u dhaxeeya.
Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in kulamadan xooga lagu saaray sidii meesha looga saari lahaa khilaaf siyaasaded horey ugu dhaxeeyey oo kasoo bilowday doorashooyinkii Soomaaliya 2017-kii iyo arrimaha dhexdooda ku jira ee kusaleysan xagga qabaa’ilkooda hoose.
PUNTLANDTIMES, waxay ogaatay in kulamadan bilowgeeda ay qeyb ka ahaayeen siyaasiin kasoo jeeda beesha ay kasoo jeedaan labada masuul, waxaana diiradda la saaray qorshaha la xariira sidii ay u difaacan lahaayeen danaha gaarka ah, ka dibna loogu gudbi lahaa arrimaha kale.
In gudaha Puntland ay yimaadaan qaar kamid ah xubnaha kasoo horjeeda Xukuumadda Siciid Deni ee beeshiisa ah ayaa kamid ah arrimaha laga hadlay, taas oo uu ka shaqeynayo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, waxaana xubnahan ku jiri doona siyaasiin, Culumo iyo shaqsiyaad caan ah oo diidan nidaamkiisa.
Sidaas oo kale, in aragtiyaha kala duwan ee laga haysto maamulkiisa meesha laga saaro, uuna helo Madaxweynaha Puntland taageerada beeshiisa ayaa kamid ah arrimaha laga hadlayo, iyadoo ay ku gadaaman yihiin is weydiimo fara badan oo aan saxaafadda lala wadaagin, gaar ahaana qadiyadaha ku saleysan arrimaha hoose.
Warsidaha ayaa fahamsan in dagaal hoosaadka siyaasadeed ee labadan siyaasi horey u dhexmaray uu bilow u noqday in xataa markii lagu jiray loolanka doorashada Puntland si weyn ay u dagaalameen, laakiin ugu dambeyn dagaalkaas ay guushu ku raacday Siciid Deni oo noqday Madaxweynaha Puntland, kana guuleystay Jeneraal Asad Diyaano oo matalayay Kooxda Cumar Cabdirashiid.
Sidaas oo kale, wada hadaladan waxaa looga hadlay qorshaha doorashooyinka Soomaaliya ee 2021-ka, iyadoo ay dood xoog badan hareeyeen doonista dhinacyadan ee kuwajahan arrimahan, xili ay wali jirto kala aragti duwanaansho u dhaxaysa dawladda Faderaalka iyo maamul gobaleedyada qaarkood.
Xogta aan ka helnay wada hadaladan, waxay kaloo sheegaysaa in ay jiri doonaan kulan weyne ay leeyihiin beesha Madaxweynaha Puntland, kaas oo uu kaga qeybgali doono magaalada Qardho ee xarunta gobalka Karkaar, kaas oo qabashadiisa haddii laysku afgarto uu dhici doono bilaha nagu soo wajahan.
Mr, Deni ayaa jaanis weyn oo siyaasadeed u arka taageero uu xiligan ka helo, beeshiisa gaar ahaana cid kasta oo kasoo horjeeda, waxaana uu dadaal badan galinayaa sidii loo mideyn lahaa dadaaladaas, taas oo ka dambeysay markii uu dhawr jeer kulamo kala gedisan la yeeshay Odayaasha dhaqanka ee beeshiisa oo uu kala hadlay taageerada Xukuumadiisa.
Laakiin saaxiibada Madaxweynaha Puntland ee u badan gobalka Nugaal, ahaana laf dhabarta in uu noqdo Siciid Deni qabto xilka u sareeya Puntland, ayaa kulamadan u arkayay halis siyaasadeed oo doonistooda ku wajahan, waxaana ciyaarayaan talaabo kasta oo ay arrimahan wax kaga bedeli karaan.
Previous Dagaal Beeleed Ka Qarxay Gobolka Saaxil Iyo Khasaaraha Ilaa Hada Ka Dhashay.
Next Ma run baa in qoyska Madaxweyne Biixi ay cabasho ka dhan ah Faysal Cali Waraabe u gudbiyeen hay’adaha sharciga